चौतर्फी वि’रोध भएपछि कोमल वलीले भनिन् :- “मेरो धारणा कुनै व्यक्तिप्रति ल’क्षित होइन ।” – Sadhaiko Khabar
चौतर्फी वि’रोध भएपछि कोमल वलीले भनिन् :- “मेरो धारणा कुनै व्यक्तिप्रति ल’क्षित होइन ।”
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ २२, २०७८ समय: १७:२५:५१
काठमाडौ / राष्ट्रियसभाकी सदस्य एवम् नेकपा (एमाले) की नेतृ कोमल वलीले आफ्ना धारणा कुनै व्यक्तिप्रति ल’क्षित नभएको स्पष्ट पारेकी छिन् । हिँजो बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘बाँद’रको जमात र अमृतपानको सपना’ शीर्षकमा कविता वाचन गरेकी थिईन् । उक्त कवितालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सबैतिरबाट आ’लोचना भएको थियो ।
आज (मंगलबार) सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आफूले देश र जनताका लागि बोलेको दा’बी गरेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्–”मेरा धारणाहरु कुनै व्यक्ति प्रति ल’क्षित छैनन् ! देश समाज र जनताप्रति सम’र्पित छन् !
देश र जनताका लागि बोल्दा कलमहरु कसैलाई निरू’त्साहित गर्न चल्नुपर्छ भन्ने छैन ! कसैलाई नि’रुत्साहित गर्न व्यक्तिगत कुरा उठाएर ब’हादुरी पनि प्राप्त हुँदैन ! यो कुरा भौ’तिक श’रिरको अ’न्त्य हुनेहरुले सोच्नु पर्छ !”
कोमल वलीलाई पत्रकार सुवेदीको प्रश्न : यहाँका अनै’तिक क’र्तुत हामीले बा’हिर ल्याउनुपर्ने हो ?
नेकपा (एमाले) की नेतृ तथा राष्ट्रिय सभाकी सदस्य कोमल वलीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘बाँद’रको जमात र अमृतपानको सपना’ शीर्षकमा वाचन गरेको कवितालाई लिएर एमालेनिकट पत्रकार संगठनका नेता तथा जनआस्था साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक विश्वमणि सुवेदी रु’ष्ट बनेका छन् । उनले सांसद वलीले एमाले भित्रपनि आफ्नो विचार समूहलाई बाँ’दरहरु भनेको भन्दै आफ्नो रु’ष्टता पो’खेका छन् ।
पत्रकार सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फे’शबुकमा लेखेका छन्-“एमालेभित्र पनि हाम्रो विचार समूहलाई ‘बाँ’दरहरु’ भन्ने मान्य गायिकाज्यू, यहाँ कहिलेको एमाले ? यहाँका अनेकन राजनीतिक वि’चलन र अनै’तिक क’र्तुत हामीले बा’हिर ल्याउनुपर्ने हो ?”
सुवेदीले वलीको नाम नै नलिईकन यस्तो लेखेका हुन् । उनले आफ्नो स्टाटसमा गायिकाज्यू मात्रै भनेर सम्बोधन गरेका छन् ।